မြန်မာအွန်လိုင်းရှော့ပင် - ဖုန်း၊အီလက်ထရွန်နစ်၊ဖက်ရှင်၊အိမ်သုံးပစ္စည်းများစွာအတွက်
WOMEN အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ တွဲဖက်အသုံးအဆောင်များ လက်ပတ်နာရီများ
MEN အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ တွဲဖက်အသုံးအဆောင်များ လက်ပတ်နာရီများ
KIDS ကလေးငယ်များ မိန်းကလေးငယ်များ ယောက်ျားလေးများ
Mr. Confident Shoes
2Health & Beauty
Health & Beauty ပစ္စည်းအားလုံးကြည့်ရှုရန်!
Fragrances အမျိုးသားများအတွက် အမျိုးသမီးများအတွက်
Make up နှုတ်ခမ်း မျက်လုံး မျက်နှာ
Body & Bath မျက်နှာ ရေချိုးဆပ်ပြာခရင်မ် ကိုယ်လုံး
Hair Care ဆံကေသာသုံး အလှကုန်များ ဆံကေသာသုံး ပစ္စည်းများ
KZ Online Shop
Phones & Tablets ပစ္စည်းအားလုံးကြည့်ရှုရန်!
Mobile Accessories Power Bank များ ဖုန်းအိတ်နှင့်ကာဗာများ နားကြပ်များ
Tablets 3G / 4G ၀ိုင်ဖိုင်
Starts at 2,000Ks
Starts at 59,900Ks
Micro (Power Plus)
Starts at 1,400Ks
Starts at 1,000Ks
4Computing & Electronics
Computing & Electronics ပစ္စည်းအားလုံးကြည့်ရှုရန်!
Computers & Laptops လက်ပ်တော့များ Storage Printers & Scanners တွဲဖက်ပစ္စည်းများ
Home Theatre & DVD players
Gaming လက်ကိုင်ဂိမ်းစက် များ ဂိမ်းခွေများ
Audio, Photo & Videos နားကြပ်များ ကင်မရာ နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Starting from 406,640ks
Starting from 7000ks
5Home & Appliances
Home & Appliances ပစ္စည်းအားလုံးကြည့်ရှုရန်!
Appliances အိမ်သုံးပစ္စည်းအသေးများ အပူပေးစက်နှင့်ပန်ကာ ရေခဲသေတ္တာနှင့်ရေခဲစက်များ ထမင်းပေါင်းအိုး
Home & Office ရေချိုးခန်းနှင့်အိပ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ ပရိဘောဂများ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ အိမ်အလှဆင် ပစ္စည်းများ
Starting at 69000Ks
Starting from 2790Ks
6Baby Care & Toys
Baby Care & Toys ပစ္စည်းအားလုံးကြည့်ရှုရန်!
Baby Baby Care Baby Feeding Baby Toys Bedroom
Toys Other Toys Dolls & accessories Arts & Crafts ကလေးငယ်များအတွက် ဒဏ္ဏာရီပုံပြင်အရုပ်များ သင်ကြားရေးဂိမ်းများ Fidget Spinners
Starts at 650Ks
Shop Mart ပစ္စည်းအားလုံးကြည့်ရှုရန်!
လူသုံးကုန်များ စည်သွပ်ဘူးနှင့်စားစရာအထုတ်များ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ စည်သွပ်ဘူးများ မုန့်ပဲသွားရေစာများ မနက်စာစားဖွယ်ရာများ
သောက်စရာများ ကော်ဖီ အချိုရည်များ စွမ်းအားဖြည့်အချိုရည်များ
ယမကာ နှင့် ဝိုင်များ ၀ိုင်များ ယမကာများ ဘီယာများ
Starting from 670Ks
Starts at 1675Ks
G&G Online Store
Shop.com.mm မှ အကောင်းဆုံးများကို သင့်ထံသယ်ဆောင်လာပါပြီ!
ရာနှုန်းပြည့် စိတ်ချယုံကြည်ရပြီး ဝယ်ယူရလွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အွန်ုလိုင်းရှော့ပင်းမောလ် Shop.com.mm မှကြိုဆိုပါတယ်။ လိုချင်သမျှ အရာအားလုံးကို အွန်လိုင်းကနေ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ၀ယ်ယူဖို့ အသင့်ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါ။ အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပြီးမှငွေပေးချေရတဲ့စနစ်ဖြစ်တာကြောင့် အလုံခြုံဆုံး ဈေးဝယ်ဖို့နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး အမှတ်တံဆိပ်များရဲ့ အစစ်မှန်ဆုံး ကုန်ပစ္စည်းများကို အချိုသာဆုံးဈေးနှုန်းများနဲ့ သင့်ရဲ့ လက်ထဲအရောက် ပို့ဆောင် ပေးနေပါပြီ။ ကလေးများ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအတွက် ခေတ်ပေါ်အဝတ်အထည်များမှစပြီး ပွဲနေပွဲထိုင်အဝတ်အစားများအထိ ဒီမှာစိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။Shop မှာနေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ် ပေးနေတဲ့ လျှော့ဈေးများနဲ့ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များကို အမြဲစောင့်ကြည့်ပြီး အခွင့်အရေးကောင်းများ ရယူနိုင်ပါပြီ။ Shop.com.mm မှာဈေးဝယ်သူများဟာ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်း ၁၆၀၀၀ ကျော်အနက်လိုအပ်သမျှကို အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ ဈေးဝယ်နိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။
Branded ပစ္စည်းများကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သူတို့အတွက် အကောင်းဆုံး အွန်လိုင်း ဖက်ရှင် စတိုး
အပြင်ဆိုင်တွေမှာ တွေ့နေကျ အ၀တ်အစားတွေကို ငြီးငွေ့လာပြီလား? Springfield, Van Heusen, Nichii, Nobody, Bossini, Hangten နဲ့ Crocodile စတဲ့ နာမည်ကျော် အမှတ်တံဆိပ်ပေါင်း များစွာအပြင် မြန်မာ့နာမည်ကြီးဒီဇိုင်နာဖြစ်တဲ့ မင်းခန့် Vestige ကဲ့သို့သော ဒီဇိုင်နာများရဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းများကို ဒီမှာ ရှာဖွေ ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် PrettyFit, Bata, Skechers, Timberland စတဲ့ branded ဖိနပ်များနဲ့ Casio, Titan, Marc by Marc စတဲ့ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ် နာရီများကိုလည်း စုံလင်စွာ ရွေးချယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလှအပရေးရာဘက်မှာဆိုရင်လည်း L'Oreal, Revlon, Wet n Wild, Cathy Doll, Nuxe, Yves Rocher, Maybelline တို့အပြင် အခြား အလှကုန်ပေါင်းများစွာကို တစ်နေရာတည်းမှာ နှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီ၊ ဂါဝန်၊ ဖိနပ်၊ အိတ်၊ နာရီ အစရှိတဲ့ ဖက်ရှင် ပစ္စည်းပေါင်းများစွာကို ၀ယ်ယူသူတွေ အဆင်ပြေစေဖို့ အစုံလင်ဆုံး စုစည်း ဖော်ပြထားတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဖက်ရှင်စတိုး ဖြစ်ပြီး အလိုရှိရာကို ထိုင်ရမထ အွန်လိုင်းကနေ မှာယူလိုက်ရုံနဲ့ အချိုသာဆုံး ဈေးနှုန်း၊ အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှု တွေနဲ့ သင့်ထံကို အရောက်ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းအတွက် ရွေးချယ်စရာ အများဆုံး အွန်လိုင်း အီလက်ထရွန်နစ် စတိုး
ခေတ်စားနေသမျှ အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းများနဲ့ လျှော့ဈေးများကို Shop မှာအမြဲရှာဖွေ တွေ့ရှိနိုင်မှာပါ။ နောက်ဆုံးပေါ် စက်ပစ္စည်းများနဲ့selfie sticks, powerbanks, smart watches ကဲ့သို့သော အသုံးတည့်ပစ္စည်းလေးများကို လျှင်မြန်တဲ့ ပို့ဆောင်မှုနဲ့အတူသင့်ရဲ့ ကျောင်း (သို့မဟုတ်) ရုံးကိုတောင် အရောက်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Sony, Samsung, Apple, Lenovo , LG စတဲ့ တက်ဘလက်နဲ့ ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်ပေါင်းများစွာရဲ့ ထွက်ရှိသမျှဖုန်းမော်ဒယ်လ်အသစ်များကိုလည်း အချိန်နဲ့တပြေးညီ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Dell Inspiron, Acer Aspire, printers များနဲ့ external hard disks အစရှိတဲ့ လက်ပ်တော့နဲ့ ကွန်ပြူတာပစ္စည်းများကိုလည်း ချိုသာတဲ့ဈေးနှုန်းများနဲ့ ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
သင့်ရဲ့အိမ်သုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုအသစ်လဲဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုရင် စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ Philips, Panasonic, Epson, Ariston, Lock & Lock နဲ့ Farfalla စတဲ့ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုသာ ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ နေ့စဉ်သုံး ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း Shop Mart မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာမို့ ဈေးတောင် သွားစရာမလိုဘဲ လွယ်ကူ အဆင်ပြေစေမှာပါ။လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးဖို့ စဉ်းစားနေရင်လည်း ခေါင်းရှုပ်ခံစရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူပေးနိုင်မယ့် လက်ဆောင်ဘောက်ချာများကို ရောင်းချပေးပါတယ်။အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများကို Shop မှ အမြဲတမ်းပေးအပ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စုံလင်တဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်းများစွာကို နေ့စဉ်၊အပတ်စဉ် လျှော့ဈေးများနဲ့ ရောင်းချပေးနေတာကြောင့် အမြဲစောင့်ကြည့်နေဖို့ မမေ့နဲ့နော်!
အချိန်မရွေး နေရာမရွေး အခက်အခဲမရှိ ဈေးဝယ်ယူနိုင်ဖို့ shop.com.mm ရဲ့ Mobile Application ကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါပြီ။ iPhone အတွက်ရော Android အတွက်ပါ ရှိတာမို့ ဒီနေရာမှာ အလွယ်တကူ ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဈေးဝယ်ယူရတာ အခက်အခဲရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဈေးဘယ်လိုဝယ်မလဲ နဲ့ အမေးအဖြေများ စာမျက်နှာတွေကို သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။